Ndiri kuda kubheja, pese paunenge uine nzira dzekushambadzira nhaurirano nechikwata chako, iwe unowanzo kurukura zvakafanana matatu kana mana mapuratifomu - Facebook? Tarisa. Instagram? Tarisa. Pinterest? Tarisa.
Asi - ko Amazon?
Muna 2018, Amazon yakatanga “Kushambadzira kweAmazon”, (yaimbove Amazon Marketing Services, kana AMS), seye yekutsvaga yekushambadzira mhinduro yevatengesi veAmazon. Zvakafanana nekubhadhara-per-tinya kushambadza paGoogle, vatengesi vanobhadhara chete kana vatengi vatinya pazvishambadziro.
AMS iri kukura nekukurumidza. Muchokwadi, mari yeAmazon yemari inofungidzirwa kuti ingangoita 12.75 bhiriyoni muna 2020, ine chinonakidza 23% kukura kubva 2019.
Kana usati wave kushandisa AMS, timu yako inofanirwa kufunga nezvayo. Amazon Kushambadza inogona kuve yepakati kushambadzira chikuva chemabhizinesi mazhinji, pamwe neimwe nzira yakanaka kune Google neFacebook.
Kuti ikubatsire kutanga kushambadzira paAmazon, isu takagadzira iri rekupedzisira gwara rinoburitsa yega yega mhando yekushambadzira iwe yaunogona kumhanya kuAmazon uye mamwe maitiro avo akanakisa. Verenga pamusoro kuti udzidze kushambadza papuratifomu yeecommerce mu2020.
Ramba uchiverenga, kana kusvetukira kune yakasarudzika mhando yeAmazon kushambadzira:
1. Amazon Inotsigirwa Ads
2. Amazon Musoro Wemusoro Kutsvaga Ads
3. Amazon Chigadzirwa Ratidza Ads
5. Amazon Vhidhiyo Ads
6. Zvitoro zveAmazon
Amazon Kushambadzira Isu
Kunyangwe isu tichave tichitsanangura shanu dzakasiyana marudzi eAmazon kushambadza ayo ese ane akasiyana akasiyana maitiro, heano manomwe manomwe akajairwa matipi ekuumba rakabudirira Amazon kushambadzira zano:
1. Sarudza zvinangwa zvako.
Kunyangwe iwe uchida kutyaira kwakawanda kutengesa kana kusimudzira ruzivo rweamaki, Amazon inokutendera iwe kuenzanisa zvinangwa zvako nezvinangwa zvako. Semuenzaniso, unogona kuona yako Kushambadzira Mari Yekutengesa (ACoS) seyako metric yekubudirira kana iwe uri kutarisa kutyaira kwakawanda kutengesa.
Neimwe nzira, iwe unogona kuona zvimiro seyako metric yekubudirira kana iwe uri kutarisa mukusimudzira chiziviso cheruzivo.
Neraki, Amazon inokamura peji yaro yechigadzirwa kumusoro kune "Zvinangwa" kana zviri nyore kwauri kuti uone kuti ndechipi chigadzirwa cheAmazon chinoshanda zvakanyanya kwauri zvichienderana nezvinangwa zvako. Semuenzaniso, vhidhiyo kushambadza, kuratidza kushambadza, odhiyo kushambadza, uye tsika kushambadzira mhinduro ndeaya inokurudzirwa kana chinangwa chako chiri chekukudza chiziviso.
Nekushanda uchidzokera kumashure kubva pazvinangwa zvako, iwe uchave nechokwadi chekuti zano raunoshandisa paAmazon rakanyanya kukodzera bhizinesi rako zvido.
2. Sarudza zvigadzirwa zvakanaka zvekushambadzira.
Kushambadzira zvigadzirwa zvako zvinozivikanwa zvinokupa iwe yakanakisa mukana wekushandura kudzvanya kuita zvekutenga. Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa izvi zvirimo uye mutengo wakakwikwidza.
Neimwe nzira, pamwe une chigadzirwa chitsva kana sevhisi iyo iwe yaungade kuwedzera kuziva. Paunenge uchisarudza izvo zvakanaka zvigadzirwa kana masevhisi ekushambadza, iwe uchazoda kuchengeta zvinangwa zvako mu-pfungwa, uye zvakare shuwa kuti waita yako research kuti uone kunyangwe Amazon iri ipuratifomu chaiyo kuratidzira zvigadzirwa zvako pakutanga.
3.Craft rakajeka, rakapfupika, uye rinogombedzera chigadzirwa ruzivo mapeji.
Kushambadzira kweAmazon kunogona kukwezva vatengi kuti vashanyire ako mapeji ezvechigadzirwa, asi peji rezvigadzirwa ndiro rinozopedzisira rashandura vatengi vacho kuva vatengi. Kugadzira rinogutsa peji rezvechigadzirwa, funga kusanganisira iwo akarurama uye anotsanangudza mazita, epamusoro-soro mifananidzo, uye akakodzera uye anobatsira ruzivo rwechigadzirwa.
4. Sarudza kwaunoda kuisa kushambadza kwako.
Amazon inopa akasiyana zvigadzirwa mukati meayo akazara kushambadzira suite - semuenzaniso, iwe unogona kugadzira izwi kushambadza kuratidza kune ese-inogoneswa-madivaysi madhijitari, vhidhiyo kushambadzira kutenderera paFire TV kana maAmazon-akasarudzika masosi senge IMBD, kana kuratidza kushambadzira kukwezva vashandisi veAmazon kune yako brand.
Paunenge uchinge waona kuti izwi, vhidhiyo, kana kutsvaga zvakakunakira iwe, iwe uchazoda kuongorora sarudzo dzakasiyana siyana, kusanganisira dzinotsigirwa shambadziro yemakambani maringe neye yakatsigirwa ads kushambadzira (iyo yatinozokurukura mune inotevera nhanho).
Ramba uchifunga, kune matani emikana yekuisa kushambadza kwako pane akasiyana madhizaini kana saiti neAmazon, saka funga kugadzira zvekugadzira. Zvichida kushambadzira kwekuteerera kunotamba pamidziyo ine Alexa-yakanakira-yakanakira bhizinesi rako, kana pamwe uchawana iyo yepamusoro ROI neAmazon DSP, iyo inobvumidza iwe kusvika kune vateereri veAmazon pane ese ari maAmazon-ane uye echitatu-bato masosi uye maapp.
5. Edza mabhenji akatsigirwa maringe nezvigadzirwa zvakatsigirwa.
Kuti tiongorore mutsauko uripo pakati pezvitsigiso zvigadzirwa maringe nezvinotsigirwa zvigadzirwa, ngatitarise muenzaniso unotevera.
Pandinotsvaga "Chikafu chevana" paAmazon, iyo yekutanga yakatsigirwa kuiswa kwandinoona iri Gerber's inotsigirwa yemhando yekutumira, iyo inosimbisa mashoma akasiyana Gerber zvigadzirwa kuwedzera brand kuziva uye kutyaira kutengesa:
Nekudaro, funga zvinoitika kana ini ndikabaya pane yega Gerber mwana chikafu chigadzirwa. Pazasi kurudyi kwechiratidziro chechigadzirwa pazasi pebhatani re "Tenga Izvozvi", ini ndinoona a Anofara Mhuri Nhengo kushambadzira kwechigadzirwa chemumwe munhu - Stage 4 Fibre & Protein yemwana homwe dzehomwe:
Uyu ndiwo musiyano uripo pakati peiyo yakatsigirwa marangi maringe neye yakatsigirwa chigadzirwa posvo. Zvichitaurwa zviri nyore, a brand inotsigirwa posvo inogona kuratidza mashoma ako zvigadzirwa kana masevhisi, uye pakupedzisira anonyanya kukodzera kumakambani ane chinangwa chekuwedzera chiziviso cheruzivo kutenderedza yakazara chigadzirwa chigadzirwa.
Zvimwe, a chigadzirwa chinotsigirwa posvo ndeye mutengo-wega-watinya (CPC) kushambadzira inosimudzira yega zvigadzirwa zvinyorwa paAmazon. Kana iwe uri kutarisira kutyaira kutengesa kune chakasarudzika chigadzirwa kana iwe waunoda kunongedza niche vateereri (semuenzaniso, chero munhu akatobaya pachigadzirwa chemukwikwidzi), iyi inogona kuve iri nani sarudzo kwauri.
6. Shandisa chikamu chakanangana nekutarisa.
Amazon inopa kufambira mberi kunongedza mashandiro kuti ikubatsire kuratidza zvigadzirwa zvako pamwe chete nezvigadzirwa zvine mbiri, kana kunyangwe padivi pezvinhu zvine chekuita netangentially - semuenzaniso, kana iwe ukatengesa K-makapu ekeurig, unogona kushambadzira kushambadziro yako kune vashandisi veAmazon vakatsvaga "keurig".
Nekushandisa Chigadzirwa Kupa Targeting, iwe unokwanisa kuratidza kushambadzira kune vatengi avo vakaratidza kufarira kune zvimwe zvigadzirwa mukati mekambani yako. Uku kugona kwekutarisa kwepamberi kunobatsira iwe kuwedzera kugona kweshambadziro kwako. Uyezve, iyo inokutendera iwe kuti uwedzere kuzivikanwa kwechiratidzo nevateereri vepamusoro-vavariro.
Semuenzaniso, pandinotsvaga mabasketball kuAmazon uye ndikadzvanya paWilson chigadzirwa, ndinogona kudzika pasi ndione chikamu chakanyorwa kuti "Zvigadzirwa zvakatsigirwa zvine chekuita nechinhu ichi":
Avid Basketball vatambi vangangoda kutarisisa pamabvi mabhureki kana emitambo makoni, ichiita ichi chinobudirira kushambadzira kuiswa. Kunyangwe kana vatengi vasiri 'mu
kunyangwe kana ndisiri mumusika izvozvi, ini ndinochengeta aya mabhenji mu-pfungwa kune ramangwana.
7. Tora mukana wemazwi asina kunaka ekuderedza kutambisa nguva.
Izvo zvakakosha iwe kuti udzivise kutambisa kushambadzira kushandisa nekusanganisira zvisina kunaka mazwi akakosha - kana ndeapi mazwi akakosha iwe regai kuda kuonekera - kudzivirira kushandira kushambadza kwako kune vanhu vasingazoshandure.
Funga, semuenzaniso, musiyano uripo pakati pekutsvaga kwe "granola bars" uye kutsvaga kwe "KIND granola bars". Iwe hausi kuda kuoneka mukutsvaga kwe "KIND granola bars", kana mushandisi akatsunga zvakajeka kuwana yakatarwa granola brand.
Nechikonzero ichi, ungangoda kuisa mabhurani senge "KIND" kana "Chewy" mune ako asina kunaka mazwi ezvinyorwa, kuti shambadziro yako igone kupihwa kune vashandisi vane ruzhinji rwekuda kuongorora akasiyana granola brand zvigadzirwa.
Iwe zvakare uchazoda kuisa asina kunaka mazwi akakosha kana asingaenderane nechigadzirwa chako kuti arege kutambisa kushambadzira kwako kushandisa kune vanhu vasingafarire chigadzirwa chako. Semuenzaniso, kana chigadzirwa chako chisina-guten, iwe uchazoda "gluten yemahara" pane ako asina kunaka mazwi ezvinyorwa.
Pamusoro pezvo, iwe unogona kufunga nezve kuwana zvakanyanya kunanga kushambadza kwako kune diki, rakanyanya-rine chinangwa boka revanhu. Panzvimbo pekungonongedza "granola bar", unogona kuedza kunongedza "yakaderera-shuga granola bar", semuenzaniso.
Amazon Inotsigirwa Ads
Amazon Inotsigirwa Chigadzirwa Ads inobhadhara-pe--kudzvanya, kiyi-yakanangwa inoratidzira kushambadzira kweayo ega zvigadzirwa zvinoonekwa pane zvekutsvaga mhinduro uye chigadzirwa ruzivo mapeji. With Sponsored Chigadzirwa Ads, kune matatu marudzi emazwi akakosha aunogona kubhidha pauri kana iwe ukafunga kukwidziridza bhuku rekutarisa - yakafara, chirevo, uye chaiyo.
Broad mazwi akakosha anokwanisa kusanganisira mazwi kumberi uye shure kweshure kiyi kiyi kiyi, senge "chena ruoko ma mixer", kana iwe ukatengesa ruoko ma mixer. Kunangisa aya mazwi akakosha kunofumura kushambadza kwako kune yakawanda kwazvo traffic.
Mashoko emashoko tarisa pamusoro pekuti maratidziro emazwi aunoshandisa anochinja sei mamiriro emubvunzo. Semuyenzaniso, "Stainless simbi ruoko chisanganiso" zvinoratidza iwe kutengesa ruoko chisanganiso. Asi "ruoko rwesimbi simbi isanganisa" rinoratidza kuti unotengesa simbi isina kusanganisa masanganisi, asi kwete hazvo simbi isina simbi ruoko ma mixer.
Mashoko chaiwo ndiwo mhando unonetsa kwazvo wezita rakanangwa - shopper yekutsvaga yekutsvaga inofanirwa kuve nezwi chairo reshambadziro yako kuratidza uye hapana mazwi anogona kuuya pamberi kana shure kweshoko rakakosha. Semuenzaniso, kana ukasarudza kunongedza chaiwo mazwi, unogona kunongedza shambadziro ye "ruoko musanganisi", asi haizoratidzi kumubvunzo "yemagetsi ruoko musanganisi".
Uchishandisa Sponsored Chigadzirwa Ads, iwe unogona zvakare kushandisa otomatiki kiyi kutarisisa, iyo inosimudza algorithm yekunangisa iwo akakosha akakosha mazwi ezvigadzirwa zvako zvechigadzirwa.
Kuyera mashandiro eshambadziro ako, Sponsored Chigadzirwa Ads inopa yekuzivisa chishandiso inoratidza kushambadza kwako 'kudzvanya, kushandisa, kutengesa, uye kushambadzira mutengo wekutengesa (ACoS).
Amazon Inotsigira Ads Akanaka Maitiro
NeAmazon Sponsored Chigadzirwa Ads, iwe unogona kuwana mazwi akakosha ane yakaderera shanduko mareti uye unomira iwo seasina kunaka Nenzira iyi, Amazon icharega kuratidza kushambadzira kwako kune vatengi vanotsvaga iyo mibvunzo. Kuve nechokwadi chekumaka mamwe mazwi akakosha seasina kunaka kwakakosha - kunyangwe kana aya mazwi akakosha ane yakadzvanya-kuburikidza-chiyero, yavo yakaderera kutendeuka mwero zvinoreva kuti vangangodaro vasiri kusvika kune chairo mhando yevatengi.
Inowanikwa muManual Targeting ad mushandirapamwe, iwe unogona kuwedzera Bhidha + kuti uwedzere mikana yekushambadzira kwako kuoneka pamusoro pemhedzisiro yekutsvaga. Unogona chete kushandisa Bhidha + pane shambadziro dzinokodzera kuoneka pamusoro pemhedzisiro yekutsvaga, asi kana ukadaro, unogona kuwedzera bhizimusi rako rekukwira kusvika pa50%, uchichengeta makwikwi ako epamusoro anoita kukwikwidza, pasina kugara uchigadzirisa mabidha ako. nemaoko.
Amazon Headline Kutsvaga Ads (aka Inotsigirwa Brand Campaigns)
Parizvino inozivikanwa seSponsored Brand Campaigns, iyi mhando yekushambadzira kweAmazon inokutendera iwe kusimudzira kiyi-yakanangwa kushambadzira kwezvakawanda zvigadzirwa pamusoro, pazasi, uye padivi pekutsvaga mhinduro.
Uchishandisa Sponsored Brand Campaigns, iwe unogona kunongedza matatu marudzi emazwi akakosha - yakashambadzirwa chigadzirwa makiyi, anowirirana chigadzirwa keywords, uye inotsigirwa zvigadzirwa otomatiki kunongedza mazwi akakosha.
Yakapiswa chigadzirwa mazwi akakosha mubatanidzwa wezita rako rechiratidzo uye chigadzirwa chaunotengesa.
Yakarongeka chigadzirwa makiyi isumbu rezvigadzirwa zviviri zvakasarudzika zvinokanganisa kudiwa kweumwe neumwe uye zvinogona kutengeswa pamwechete (senge ketchup nemasitadhi).
Sponsored zvigadzirwa otomatiki akananga mazwi akakosha ndiyo mibvunzo yekutsvaga yawakatowana kubudirira nayo uchimhanyisa otomatiki yakanangwa yakatsigirwa yemishandirapamwe yechigadzirwa.
Sponsored Brand Campaigns zvakare inoita kuti iwe uise kusvika kune matatu akasiyana zvigadzirwa mune ako kushambadzira, gadzirisa yako ads 'mufananidzo, musoro wenyaya, uye kumhara peji, uye kunyange kuyedza izvi zvinhu.
Pazasi pane chifananidzo kubva kuAmazon icho chinodonongodza mazwi akakosha iwe aunogona kushandisa kune ako akatsigirwa marasha emakampeni:
Kuti uone kuti unobhadhara zvakadii maSponsored Brand Campaigns, Amazon inoshandisa pay-per-click, auction-based pricing model, kuti usazombobhadhara zvakadarika zvaunobhadhara pakudzvanya. Kunze kwekubhidha kwebhuku, iwe unogona kusarudza otomatiki kubhidha, inozokwidza kushambadza kwako kushanduko.
Kana iwe uchida kuziva kuti zvakanaka kushambadza kwako kuri kuita, Sponsored Brand Campaigns inopa chirevo chekuratidzira chinoratidza kushambadza kwako kushambadza, kushandisa, kutengesa, inofungidzirwa kuhwina mwero wemazwi akakosha, uye ACoS (Kushambadzira Mutengo weKutengesa).
Pazasi, Shirt Vanopinda inosimudzira matatu emaT-shirts avo. Kudzvanya pane yega yega mahembe kunoenda chaizvo kune peji yechigadzirwa. Nekudaro, kudzvanya pane bhatani re "Tenga Izvozvi" pazasi pekopi kunokutora iwe kuAmazon Store yayo:
Sponsored Brand Campaigns Akanaka Maitiro
Iyo pfungwa yakanaka kuratidza matatu epamusoro-ekugadzira zvigadzirwa mune yako Inotsigirwa Brands Campaign yekuwedzera huwandu hwekudzvanya uye kutengesa ako mashambadziro anogadzirwa.
Amazon inokurudzirawo kusanganisira yako yepamusoro zvigadzirwa kubhenefiti mumusoro wako wekushambadzira nekuti vatengesi venhare vanogona kungoona mufananidzo mukuru wechirevo uye musoro wenyaya.
Pamusoro pezvo, kana uchitsanangura chigadzirwa chako, edza kusatora chigadzirwa chako "# 1" kana "Mutengesi Wakanakisisa" - shambadziro yako haizotenderwe.
Kuti umhanye bvunzo dzakanyatsojeka uye dzine zvibereko, funga nezve kungochinja imwe chete panguva, kumhanya kweanenge mavhiki maviri, uye simbisa kubudirira kwemiedzo yako kune zvinangwa zvebhizinesi.
Kumhara Peji Dhizaini
Uine Sponsored Brands, unogona kunongedza vatengi kuchitoro chako cheAmazon kana peji rezvigadzirwa. Funga kuyedza masiyano emapeji echigadzirwa anoshandura sei vashanyi kuva vatengi, pamwe nemarongedzero anoita zvigadzirwa zvako.
Amazon Chigadzirwa Ratidza Ads
Chigadzirwa chinoratidza kushambadzira chiri kubhadhara-per-tinya shambadziro dzinoonekwa pamapeji enongedzo echigadzirwa, mapeji eongororo yevatengi, pamusoro peiyo peji rekupa, uye pazasi mhedzisiro yekutsvaga.
Iwe unogona zvakare kuisa kushambadza uku pane yakasiyiwa ngoro maemail, ekutevera-kumusoro maemail, uye ekurumbidza maemail. Chinangwa chavo chikuru ndechekuyambuka-kutengesa kana kusimudzira vatengi vako.
Uchishandisa zvigadzirwa kuratidza kushambadzira, unogona kushandisa maviri marudzi emushandirapamwe wekutarisa: chigadzirwa uye kufarira. Chigadzirwa chinotarisa chimiro chechimiro chekutarisa, kuti iwe ugone kunongedza chaiwo zvigadzirwa uye zvine hukama zvikamu. Kufarira kunongedza Hunhu hunhu hwekunongedza, saka unogona kunanga shopper kufarira uye kusvika kune vakawanda vateereri.
Chigadzirwa chinoratidza kushambadza zvakare ngachiite kuti iwe usarudze ayo ari-epakati mapeji emapeji iwe aunoda kushambadza pauri, gadzirisa yako yekugadzira, uye inopa chishandiso chekuratidzira icho chinoratidza makwikwi ako 'kudzvanya, kushandisa, kutengesa, kushambadzira mutengo wekutengesa (ACoS), yakadzama peji maonero , shandisa, zviyero zvakatengeswa, kutengesa kwese, uye avhareji mutengo-wega-kudzvanya (ACPC).
Amazon Chigadzirwa Ratidza Ads Akanaka Maitiro
Shandisa chigadzirwa kunongedzera pamakwikwi mapeji, anowirirana chigadzirwa ruzivo mapeji, uye ako ega chigadzirwa ruzivo mapeji kuyambuka-kutengesa uye upsell zvakafanana zvigadzirwa. Uchishandisa chigadzirwa chakanangana nezvikamu zvine hukama zvinowedzera kusvika kwako kune zvikamu zvekatalog yeAmazon inoenderana nezvako zvigadzirwa.
Paunenge uchigadzira misoro yako, Amazon inokutendera iwe kusanganisira mitsara yakadai se "Exclusive", "Nyowani", "Tenga Izvozvi", uye "Sevha Izvozvi", asi kuita zvirevo se "# 1" kana "Beat Mutengesi" kuchaita kuti kushambadza kwako kurambwe.
MaAmazon Native Ads ma ads aunogona kuisa pane yako brand webhusaiti. Kune matatu marudzi ezvakashambadzirwa zvemuno: kukurudzira kushambadzira, kutsvaga kushambadzira, uye kushambadzira kwetsika.
Mazano ekushambadzira ma ads iwe aunogona kuisa mune zvigadzirwa chinyorwa mapeji pane yako webhusaiti. Aya ma ads ane simba, saka Amazon inozadza yako yakakosha kurudziro yechigadzirwa kunoenderana neyako peji rewebhu zvemukati uye vashanyi.
Tsvaga ads ndidzo shambadziro dzinowanikwa pawebsite yako zvichibva pamazwi akakosha anotsvaga vatengi vako paAmazon kana pawebhusaiti yako.
Tsika kushambadza inobvumidza iwe kuti usarudze yako yega assortment yezvigadzirwa iwe zvaungade kusimudzira uye uzviise pane chako chigadzirwa chinyorwa zvinyorwa.
Amazon Native Ads Akanaka Maitiro
Kungofanana nekufona-ku-kuita pane blog blog, ita shuwa kuti ako ekuzvarwa ekutengesa kushambadzira akakodzera zvakanyanya kune iwo mapeji iwe aunoisa pairi. Nenzira iyi, kana vashanyi vewebhusaiti yako vapedza kuverenga yako posvo, iwo ma ads inhanho inotevera inoteedzera uye inogona kutungamira kune kumwe kutendeuka.
Amazon Vhidhiyo Ads
Amazon Vhidhiyo Ads ndeyekushambadzira iwe yaunogona kuisa kumaAmazon-ane saiti saiti seAmazon.com uye IMDb, Amazon zvishandiso senge Fire TV, uye zvakasiyana zvivakwa pawebhu. Unogona kutenga Amazon vhidhiyo kushambadzira zvisinei nekuti unotengesa zvigadzirwa kuAmazon kana kwete, uye iwe unogona kuseta yako yekushambadzira peji seAmazon chigadzirwa peji, yako pachako webhusaiti, kana chero imwe peji rewebhu pane internet.
Kana iwe uchida kushanda pamwe neAmazon vhidhiyo kushambadza vanopa mazano, iwe unogona kusainira yavo yakachengetedzwa-sevhisi sarudzo, asi kuti uve unokodzera, iwe kazhinji unofanirwa kushandisa yakaderera $ 35,000 pane vhidhiyo kushambadzira.
Vashandisi vanogona kusimudzira yavo mhando kana chigadzirwa pane yako wega yakawanda peji Amazon Store. Uchishandisa matemplate eAmazon kana kudhonza-uye-kudonha mataira, unogona kuratidzira zvigadzirwa zve brand yako kana portfolio yebasa.
NeAmazon Stores, mabhenji anowana iyo Amazon URL uye anogona kuona traffic analytics, inovagonesa kuchengeta track yekutengesa, traffic traffic, uye kushambadzira kushambadzira.
Pamusoro pezvo, kugadzira iyo Chitoro cheAmazon mahara.
Zvitoro zveAmazon Zvakanakisa Maitiro
Paunenge iwe wagadzira iyo Chitoro cheAmazon, unogona kushandisa analytics chishandiso kuti uwane iwo ekumusoro anoita mazwi akakosha akashandura kutengesa. Pamusoro pezvo, iyo analytics chishandiso inokuzivisa iwe izvo zvigadzirwa zvinotengesa.
Izvi zvinokuzivisa iwe kuti ndezvipi zvigadzirwa zvaungade kufunga nezve yakabhadharwa kushambadzira mushambadziro. Uyezve, inoratidzawo kuti vangangove vatengi vanofarira.
Pazasi pane muenzaniso weiyo Chitoro cheAmazon:
Paunogadzira iyo Amazon Chitoro, akanakisa maitiro akafanana neakanakisa maitiro eayo chero peji yekumhara - shandisa yakajeka mifananidzo, nyore-kuverenga zvinyorwa, uye yakajeka mitengo. Pamusoro pezvo, ita shuwa kuti unoratidzira zvigadzirwa zvako zvepamusoro soro. Kana iwe unogona kusarudza kuunza zvigadzirwa zvitsva paChitoro chako futi.
Usati wagadzira Chitoro chako, huya nezvigadzirwa zvaunoda kuratidza pakufamba kwako. Wobva wanyora zvigadzirwa zvako zvese zvaucharatidza pamapeji iwayo. Chekupedzisira, unganidza iwo akajeka, ehunyanzvi mapikicha echigadzirwa chako, nyora zvinyorwa zvako, uye nyora mitengo yako.
pakupedzisira, kutengesa kuAmazon inogona kuve inokanganisa nzira yekutengesa yeecommerce brand. Sezvo vatengi vachiramba vachitsamira pakutenga pamhepo, kushambadzira kweAmazon kunogona kuita basa rakakura mukutengesa kwako pamhepo.
Vari maAmazon 'Anotsigirwa Zvigadzirwa' Ads Yakakodzera Izvo?
Amazon SEO: Nongedzo yekuvandudza yako masosi paAmazon